सूर्तिजन्य पदार्थ लिएर मन्त्रालय जादै हुनुहुन्छ: सावधान !!! – MEDIA DARPAN
सूर्तिजन्य पदार्थ लिएर मन्त्रालय जादै हुनुहुन्छ: सावधान !!!
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १२ चैत्र २०७४, सोमबार १५:०२
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले अब सूर्तिजन्य पदार्थ लिएका व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेश नपाउने बताएकी छन् । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण नियमको कार्यान्वनय गर्न यस्तो उपाय अपनाउन लागेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
पदवहालीपछिको पहिलो पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन् , ‘म मन्त्रालयमा जति दिन रहन्छु काम गरिनै रहन्छु र हरेक नियम बनाइसकेपछि लागू आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसैले अवदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन त परै जावस खल्तिमा बोकेका व्यक्तिले पनि प्रवेश पाउने छैनन् ।’
उनले मन्त्रालयको गेटमा रहने सुरक्षा कर्मीले सूर्तिजन्य पदार्थ बोकेको नबोकेको बारेमा सोधपुछ तथा खानतलासि लिन सक्ने समेत बताइन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायहरुमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा निशेध गरेको छ । तर अहिले पनि मन्त्रालय परिषरमा फाट्ट फुट्ट सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेको भेटिने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सूर्ति नियन्त्रणका लागि उत्कृष्ठ कानून बनाएर अन्तराष्टिय अवार्ड हात पारेपनि कार्यान्वनय कडाई गर्न नसक्दा बेलाबखत आलोचित हुने गरेको छ । राज्य मन्त्री अर्यालको घोषणाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयनलाई पुन: प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
घरबहाल कर विवाद टुंगियो